Gacan-ku dhiigle Xasan Xanafi Xaaji oo Dil Toogasho ah Lagu Fuliyey – Radio Daljir
Abriil 11, 2016 8:34 b 0
Waxaa maantey oo Isniin ah taariikhduna tahay 11 Abril dil toogasho ah lagu fuliyey Xasan Xanafi Xaaji Casalaam oo ka tikrsanaa al-Shabaab isla markaana ku eedaysnaa in uu diley soona abaabuley dilkooda weriyaal badan kuwaas oo lagu diley Muqdisho sanadihii 2007 – 2011.
Xasan Xaaji Cabdullaahi (Xanafi) oo horey u ahaa weriye ka soo shaqeeyey qaar kamid ah idaacadaha Muqdisho ayaa ka mid noqdey ururka al-Shabaab sanadkii 2006 sida uu sheegey isagu, waxaana uu noqdey iskuxiraha al-Shabaab iyo Warbaahinta.
Dilka Xasan Xanafi ayaa ka dhacay fagaaraha dadka lagu toogto ee Iskoolka Booliska magaalada Muqdisho, waxaana dilkiisa loo adeegsadey rasaas ay ku fureen koox ka mid ah ciidanka Dowladda.
Maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa 3 Maarso ku xukuntey xukun dil ah oo rasaas lagu dilaayo, kadib markii ay u caddaatey in uu amrey oo diley qaar kamid ah Suxufiyiinta Soomaaliyeed, waxaana uu ku guulkdaraystey rafcaan uu qaatey oo mar labaad ayaa 26 Maarso lagu xukumey dil.
Xasan Xanafi Xaaji Casalaam ayaa laga soo qabtey dalka Kenya isaga oo doonaayey in uu Kenya uga dhoofo mid kamid ah dalalka Yurub sida uu sheegay. Ciidanka amaanka Kenya ayaa u soo gacan geliyey Dowladda Federaalka ah sanadkii 2014.
Sidaan oo kale ayaa maalintii Sabtida dil toogasho ah lagu fuliyey laba nin oo ku edeysnaa in ay dileen gabadh weriye ahayd oo horeyna ninkeeda al-Shabaab u dileen.
Madaxweynaha oo furey kalfadhigii ugu danbeeyey ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya